संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने कुरा संघीयता नबुझ्नेको तर्क हो | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७८ मंसिर २२ गते ०९:२१
नाम्गेल जाङ्बु शेर्पा, नगरप्रमुख सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका
२०७४ सालको निर्वाचन ताका घोषणा गरेको कति प्रतिशत काम सप्पन्न गर्नुभयो ?
निर्वाचनको समयमा जनताको माझमा अमुल्य मत माग्दै प्रतिबद्धता गरेको ७० प्रतिशत कार्यहरु पूरा भएको छ । जनताबाट आएको प्रतिक्रियाले पनि मलाई यही महसुस भएको छ । यहाँका जनताले मलाई भनेका छन "सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको प्रमुख भएर तपाँई आएपछि यो चार वर्षको अवधिमा यति धेरै काम होला भनेर सोचेका थिएनौं । सडक निर्माण, स्वास्थ्य,शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा राम्रो विकास भएको कारण हामी यहाँको जनप्रतिनिधिबाट सन्तुष्टि छौँ ।"
यस नगरपालिकाभित्र सडक निर्माण, कालोपत्रे र ट्र्याक खोल्ने काम चाहिँ कति भएको छ नि ?
नगरपालिकाले सडक विस्तारलाई ध्यानमा राखेको छ । म लगायतका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुनु अगाडी सदरमुकाम सल्लेरी आसपासका केही ठाउँ बाहेक धेरै ठाँउमा सडक संजाल पुगेको थिएन । म लगायतका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएपछि नगरपालिकाको आफ्नै स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर एकदम तीब्र गतिमा सडक निर्माणका कामहरू भएका छन । जहाँसम्म तपाईंले कालोपत्रेको कुरा गर्नुभयो नगरपालिकाको केही ठाउँमा नगरपालिकाकै सक्रियतामा सडक विभागबाट कालोपत्रेको कामहरू भइरहेको छ । अब फाप्लुदेखि टाक्सिन्धु हुँदै खुम्बु पासाङल्हामु जोड्ने बाटोलाई कालोपत्रे गर्ने भनेर सर्वे तथा डीपीआर गर्ने काम हुँदैछ । करिब यो वर्षको अन्त्यसम्ममा टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारीमा छ । नगरपालिकाको धेरै ठाउँहरु जस्तैः टाक्टोर, टाक्सिन्धु, गोराखानी, टाप्टिङ लगायतका स्थानमा सडक स्तरोन्नति गरिरहेका छौँ । वर्षायामम बाढी पहिरोले क्षती पुर्‍याएका सडकलाई पनि मर्मत गरेर बार्‍है महिना सवारीसाधन चल्न सक्ने बनाउदैछौँ । त्यस्तै नगरपालिकाको सत्तरी प्रतिशत लगानीमा ७/८ वटा पक्की पूल बनेका छन । मलाई लाग्छ यति धेरै काम प्रदेश नम्बर १ को कुनै पनि स्थानीय तहले गरेको छैन ।
नगरप्रमुख भएर आएपछि केकस्ता चुनौतीहरु भोग्नु पर्‍यो ?
यो नगरपालिका भूगोलको हिसाबले धेरै ठूलो छ । भौगोलिक हिसाबले यो नगरपालिका सिङ्गापूर माल्दिभस भन्दा पनि ठुलो छ । यहाँको गाउँ बस्ती छरिएको अवस्थामा छ । म आउनुभन्दा अगाडी यो नगरपालिकाको स्रोतसाधन कम थियो । राजस्व कम उठ्थ्याे । ठुलो राजस्व उठ्ने उद्योगधन्दा, कलकारखाना पनि छैन । कसरी राजस्व बढी आउन सक्छ, त्यसका लागि पनि हामी छलफल तथा अनुसन्धान गर्दैछौँ । केन्द्रिय सरकारबाट आउने आर्थिक अनुदान पनि कम छ । यति हुँदाहँदै पनि यो नगरपालिका प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गरिरहेको छु । नगरपालिकाकै स्वामित्वमा रहने गरी विकास गर्नका लागि डोजर, टिप्पर, रोलर लगायतका आवश्यक साधनहरु खरिद गरिएको छ । अचानक भईपरी आउने समस्या समाधानका लागि एम्बुलेन्स दम्कलको व्यवस्था गरेका छौँ । एम्बुलेन्स थप्ने क्रममा छौं । यस्ता विभिद समस्या तथा चुनौती आए । तैपनि समाधान गर्दै व्यवस्थापन गरेको छु ।
नगरपालिका भएपछि हरप्रकारको सेवा सुविधा हुनुपर्ने तर नगरपालिकाले त्यस्ता प्रकारको सेवा सुविधा दिन सकेन, महँगी बढ्यो भनेर नगरवासीहरुको गुनासो छ नि ?
नगरपालिकाले त्यस्तो खालको कुनै पनि राजस्व संकलन गरेको छैन । अर्को कुरा एकीकृत सम्पती कर लागू गर भनेर हामीलाई केन्द्रिय सरकारले दबाब दिएको दियै छ । यकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरेको खण्डमा नगरपालिकाको स्रोत त पक्कै बढ्थ्यो तर यहाँका जनतालाई ठुलो आर्थिक भार पर्थ्यो । त्यसकारण हामीले एकीकृत सम्पती कर लागू गरेनौं । जहाँसम्म महँगीको कुरा छ यो नगरपालिकाको मात्रै होईन देशकै समस्या हो । नगरपालिकाले मात्रै महँगी नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो नेपाल सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । महँगी नियन्त्रण गर्न प्रत्येक जनताको आर्थिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । घरेलु उत्पादनलाई बढुवा दिन आवश्यक छ । बाहिरबाट आयात हुने सामानहरुलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो उत्पादनमा आफै लाग्ने हो भने महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकावासीलाई आर्थिक सुधार ल्याउने कुराहरु केके छन त ?
यहाँका धेरै जनताहरु कृषि पेशामा आवद्ध छन । नगरपालिकाले धेरै लगानी कृषिमा गरेको छ । त्यस्तै पशुपालन, पर्यटन, युवा स्वरोजगारमुलक क्षेत्र लगायत विभिन्न आयमुलक क्षेत्रमा तालिम दिएको छ । उक्त तालिमबाट हाँसिल गरेको सीपलाई प्रभावकारी रूपमा उत्पदन क्षेत्रमा लगाउन तथा सौलियत कर्जा उपलब्ध गराउन वित्तीय सँस्थाहरुसग सम्झौता गरेर नगरपालिकाले सहजीकरण गरिरहेको छ । यो नगरपालिकालाई प्रदेश नम्बर १ मै एडीबीले स्याउ खेती, किबी खेती, ओखर खेती लगायतका खेतीलाई लगानी गर्दैछ । यो परियोजना पार्न सफल भएका छौँ । नगरपालिकाले पनि आलुखेती, बाख्रापालन, चौरीपालन आदि कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषकलाई अनुदान दिएका छौँ । यसबाट अहिले नै प्रत्यक्ष यसको प्रतिफल नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिफल देखिने क्रममा छ ।
कृषि अनुदान पाउन केकस्ता मापदण्ड वा प्रावधानहरु छन ?
कृषि अनुदान पाउनलाई केही मापदण्डहरु छन । सहकारी मोडेललाई प्राथमिकता दिएका छौँ । समुहमा खेती गर्नुपर्ने, व्यक्तिले सहलगानी वा साजेदारी गरेर काम गर्नुपर्ने नै मुख्य मापदण्ड हुन । तर व्यक्तिगत रुपमा चाहिँ नगरपालिकाले अहिलेसम्म अनुदान दिएको छैन ।
तपाँईको कार्यकाल सकिनै लागेको छ, तपाईंको कार्यकालपछी सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकालाई कस्तो रूपमा पाउन सक्छौ ?
अब हामीसँग लगभग एक वर्षको मात्रै समय छ । काम गर्ने मान्छेको लागि एक वर्ष पनि प्रयाप्त समय हो । त्यसकारण नगरपालिकाले मुलतः योभन्दा अगाडी संचालनमा रहेका बहुवर्षिय योजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्नु हो । साथै नगरपालिकाले विकासको उपलब्धिहरु केके भयो भन्ने कुरा उठान गर्ने र हाम्रो पालामा भएका प्रगतिलाई जनतासामु प्रत्यक्ष देखाउने नगरपालिकाको तर्फबाट गर्नेछौं । त्यस्तै लिखुपिके गाउँपालिका र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका जोड्ने लामाजुरा भञ्ज्याङ्को बाटोलाई सम्पन्न गर्नेछौं । यस नगरपालिकाको सबै क्षेत्रमा विधुत पुर्‍याउने छौँ । निर्माणाधीन फाप्लु अस्पतालको भवन समयमै सम्पन्न गर्ने छौं ।
केन्द्रीय राजनीतिले स्थानीय सरकार संचालन गर्न कत्तिको गार्‍हो भएको छ ?
ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछि देश संघीयतामा आयो । संघीयताकाे पहिलो अभ्यास हामीले गरिरहेकाछौँ । त्यसमा कानुनी झन्जिटिला कुराहरु, अधिकार बाडँफाडँका कुराहरु, स्रोतसाधनका कुराहरु लगायतका कुरा समस्याका विषय छन । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि केही द्वन्द्वको अवस्था छ । केन्द्रीय सरकारमा पनि संघीयता विरोधी पार्टीहरु पुगेको कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुन रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्थ्यो जुन रूपमा स्रोतसाधन हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो अधिकार दिइनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन । त्यसकारण हामीले कल्पना गरे अनुसार स्थानीय तह अगाडी बढ्न सकेन ।
यसको मतलब संघीयता चाहिदैँन र संघीयता विरोधी पार्टीको हाबी भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
सिधासिधा भन्नुपर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संघीयता आएको हो । संघीयता सहितको संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन पार्टी सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला र गणतान्त्रिक देशको पहिलो राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको पालामा तीन तहको चुनाव सप्पन्न भयो । त्यसपछि नेकपा माओवादीको बाम गठबन्धनको पार्टी सरकारमा पुग्यो । त्यो सरकारले संघीयताको स्पीडलाई बुझ्न सकेन । उहाँहरुले चाँही प्रदेश र स्थानीय तह भनेको केन्द्रकै ईकाई हो त्यसकारण अधिकार स्रोतसाधन केन्द्रबाट नै जानुपर्छ । विकेन्द्रीकरण गर्न हुँदैन र केन्द्रकै निर्देशनमा केन्द्रबाट दिएको स्रोतसाधनमा स्थानीय तह चल्नुपर्छ भन्ने ढंगले तत्कालीन नेपाल सरकार अगाडी बढ्यो ।
जसको कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आयो । यसले गर्दा स्थानीय तहले जुन रूपमा काम गर्नुपर्थ्यो त्याे रूपमा काम गर्न सकेन । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा अंकुश लगाउने काम गर्‍यो । अधिकार बाँडफाँड र स्रोतसाधन हस्तान्तरणमा बन्देज गरेपछि स्थानीय तह राम्रोसँग अगाडी बढ्न सकेन । केन्द्रिय सरकारसँग हाम्रो गुनासो छ । स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउन सकेको खण्डमा मात्रै संघीयता बलियो हुन्छ ।
नेपालले संघीयता धान्न सक्दैन खर्चिलो भयो भन्ने कुरा शीर्ष नेताबाट नै आउन थालेको छ नि ?
नेपालले संघीयता धान्न सक्दैन खर्चिलो भयो भन्न्ने कुरा आर्थिकसँग जोडिएर आयो । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै संघीयताको आर्थिक भार घटाउन पनि सकिन्छ । कर्मचारी कटौती गरेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या घटाएर स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर खर्च घटाउन सकिन्छ । नेपालले सघीयता धान्न सक्दैन खर्चिलो भयो भन्ने कुरा संघीयता नबुझेका मान्छेले भन्ने कुरा हो । संघीयाता मन नपराउने मान्छेको तर्क हो ।
विगतका दिनमा गरेको योजनाहरुलाई नै सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर समयमै काम सम्पन्न गर्नु हो । भोलीका दिनमा आउने जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि लाई काम गर्न सहज हुने गरी नगरपालिकाका हरेक जगलाइ बलियो बनाउने हो । जस्तै कानुन, न्याय, नीति निर्माण निर्देशिका कार्यविधि लगायतका विभिन्न कुराहरुलाई अगाडी लैजाने योजना छ ।
कोरोना कहरका काराण अप्ठ्यारोमा परेको व्यवसायी तथा व्यक्तिहरुलाई केकस्ता सेवा सुविधा दिनुभयो ?
यो समयमा जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित गराउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । नगरपालिकाले यो जिल्लामै सबैभन्दा व्यवस्थित क्वारेन्टाइन संचालन गर्‍यौं । निशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चाल गर्‍यौं । नगरपालिकाको मातहतमा रहेको स्वास्थ्य सँस्थाहरुमा आवश्यक पर्ने अक्सिजन, कन्सन्ट्रेटर, अक्सिमिटर, मास्क, सेनिट्राईजर लगायत सबै कुरा व्यवस्था गर्‍यौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लूएचओ र नेपाल सरकारले दिएको मापदण्डअनुसार नै काम भएको छ । अब केही समयभित्र नै कोरोना खोप लगाउन बाँकी सबैलाई भ्याक्सिन लगाईसक्ने छौँ । कोरोना कहरका कारण ठप्प भएका व्यवसायी तथा व्यक्तिलाई आर्थिक सहजीकरण गर्ने पहल गर्दैछौँ । स्वरोजगार सिर्जना गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ । कोरोनाको समयमा पनि नगरवासीहरुलाई स्वरोजगार हुने खालको कामहरु संचालन गर्‍यौं । उदाहरणका लागि नगरपालिकाले नगरपालिकाको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्दा खेरी स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम गरेकाछौँ । धेरै योजनाहरुलाई उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यक्रम गरेको छ । जसले गर्दा जुन शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याईएको हो त्यही शीर्षक र सम्बन्धित समुदायमा पुग्ने गर्छ । उहाँहरुले रोजगार पाउनुहुन्छ । विकास निर्माणमा पनि उहाँहरुको सहभागिता हुन्छ । त्यसकारण कोरोना कहरको बेलामा यो नगरपालिकाले रोजगारमुलक र आर्थिक चलायमान हुने काम गरिरहेको छ ।